प्रश्नोत्तर | Nepal Hypnosis Clinic and Training
तपाईँहरूले सोध्नुभएका प्रश्न र हाम्रा मनोविधहरूले दिनुभएका उत्तर ।
किन उनलाई अविस्कार गरें भन्ने कुराको तनावमा म अचेल उनीलाई धेरै माया गर्छु!
मेरो साथी मसँग एकदम हैकम चलाउँछ!
मेरो छोरा मसंग नजिक हुनै मान्दैन!
मलाई बेलाबखत अत्यन्तै रीस उठ्छ । रिसाएको बेला आँखै देख्दिन । रीस मरेपछि लाग्छ बेकार यस्तो गरिएछ । मेरो समस्याको कारण के होला ? के यो समस्या निराकरण गर्न सकिएला ? (दीपक ढकाल)
सोच्दै छु, छुट्टिने वा पारपाचुके नै गर्ने !
म ४० बसन्त पार गर्नै लागेको मान्छे परें । मैले विवाह गरेको पनि झन्डै १७ वर्षपुग्न लागेछ । सुरु-सुरुका दिनबाहेक मैले उनलाई मनदेखि माया गर्न सकिनँ । हरेक घरायसी क्रियाकलापमा कुरा नमिल्ने त छँदैछ, कुनै पनि विषयमा कुरा मिल्दैन । हरेक प्रयास गर्दै सँगै बस्ने समय मिलायो, तुरुन्तै झगडा भइहाल्छ । हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । कठोर निर्णय लिन पनि अलि गाह्रो छ । आजभोलि सोच्दै छु, छुट्टिने वा पारपाचुके नै गर्ने । मेरा लागि अब उपयुक्त बाटो के होला? सुझाव पाए आभारी हुने थिएँ ।
Subscribe to प्रश्नोत्तर